Tababare Maxamed C/qaadir”Booqashadeena Dalka Waxay Inoo Sahashay In Aan Soo Laabano” - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
18-December 2018-Waxaa garoonka Aadan Cadde ee caasimada Muqdisho kasoo dagay wafdiga kooxda Som United oo ah koox Soomaaliyeed oo ka diiwaan gashan horyaalka heerka afaarad ee dalka Sweden u jadeeda socdaalkooda waxa uu ahaa is-dhaxgal bulsho iyo ciyaar saaxiibtinimo iyo in ay ogaadaan is badalka ka jira wadankooda hooyo ee Soomaaliya.
22-December 2018-Wiilasha Som United ayaa caasimada ku dheelay kulankoodii kowaad ee ciyaaraha saaxiibtinimo ee loo qorsheeyay waxayna ciyaaro xiiso badan la yeesheyn kooxda Muqdisho United oo ka mid ah kooxaha u diiwaan gashan xiriirka kubbadda cagta labada dhinac ayaa soo bandhigay ciyaar ku dheehan farsamo oo aad usoo jiidatay taageerayaashii kasoo qeyb galay.
24-December 2018-Kooxda Som United ayaa kulankii 2-aad garoonka Banaadir ee degmada Cabdi Casiis kulan xiiso badan kula ciyaaray wiilasha Madbacada Qarankka waxaana kulankaas natiijo 3-1 ku adkaatay xidigaha Som United,qaar ka mid ah ciyaartooyda Madbacada Qaranka ayaa inoo sheegay in kooxda Som United lag helo karo xirfadlayaal tira badan oo kaabi kara mustaqbalka safka xulka qaranka dalka.
26-December 2018-Ra’iisul wasaaraha xukuumada Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan is barasho iyo xog wareesi la yeeshay wafdiga ciyaartooyda iyo macalimiinta kooxda Som United,Khayre ayaa dhageestay fikirka dhalinyarada ku koray qurbaha ee ku aadan horomarinta wadanka wuxuuna si guud mahad celin ugu diray dhamaan kooxihii qurbajoogta ee sanadkii tagay 2018 dalka u yimid ciyaaraha saaxiibtinimo iyo is dhaxgalka.
27-December 2018-Kooxaha kubbadda cagta L.L.P Jeenyo iyo Som United ayaa wada dheelay kulan ciyaareed tariikha ah oo aysan labada dhinac iloobi doonin sababtoo ah Bashiir Jeenyo oo ahaa madaxdii wafdiga kooxda Som United ayaa waxa uu ka mid ahaa xidigihii ugu caansanaa ee soo maray L.L.P,isagoo door wacan ka ciyaaray sanadii 2012 in dib loo soo celiyo Jeenyo ciyaarta markii ay dhamaatay labada dhinac ayaa wada galay sawirro xasuus oo ay qeyb ka ahaayeen xidigihii kubbadda kolayga iyo kubbadda cagta ee soo maray Jeenyo.
Marka laga soo tago ciyaarihii saaxiibtinimo ay caasimada ku dheeleen xidigaha kooxda Som United iyo kulamadii ay la yeesheen qaarka mid ah madaxda dowlada waxa ay booqasho iyo dalxiis ku qaateen xeebta Liido ee degmada C/Casiis waxaa ii suura gashay in aan xeebta labaad waraysiyo kula yeesho macalimiinta iyo ciyaartooyda,iyagoo sharaxaad ka bixiyay farqiga u dhaxeeya xeebta dalkooda iyo wadamada kale ee caalamka.
28-December 2018-Wasiirka amniga Dowladda Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo xilidhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka ayaa kulan is barasho la qaatay kooxda Som United,mas’uuliyeenta dowladda ka socotay ayaa xog wareestay dhalinyarada,iyagoo waydiiyay waxa ka jira wadanka iyo wixii ay ka arkeyn baraha bulshada inta aysan soo caga dhiganin.
29-December 2018-kulankii u danbeeyay ee ciyaaraha saaxiibtinimo kooxda Som United waxa ay la dheeleen xidigaha Muqdisho City Club oo iyagana kolkii kowaad ku ciyaaray magaca caasimada ama dowaladda hoose ee xamar tan iyo markii ay la wareegeen maamulka Gobolka Banaadir 25-November 2018 garoonka waxaa ciyaartaas usoo xaadiray mas’uuliyeen ka socotay maamulka Gobolka Banaadir,iyagoo mahad celiyay wiilasha Som United qaabka wanaagsan ay isku soo abaabuleen iyo wacdarihii ay soo bandhigeen kulamadii ay ciyaareen.
30-December 2018-Gudoomiyaha Gobalka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (EngYariisow) ayaa kulan sagootin ah caasimada ugu sameeyay wafdiga Som United waxaana madashaa kasoo qeyb galay mas’uuliyeen ka socotay dowladda,gudoomiyaasha degmiooyinka Gobolka Banaadir dadkii kasoo qeyb galay munaasabada ayaa mastaqbal wanaagsan u rajeeyay xidigaha kooxda Som United,iyagoo kula dardaarmay in sanadaha soo aadan laga sugayo dhamaan gobolada Soomaaliya.
30-December 2018-Wafdiga ciyaartooyda iyo macalimiinta kooxda Som United ayaa ka ama baxay caasimada Muqdisho,iyagoo ku laabtay dalka Sweden inta aysan ka duuulan garoonka aadan cadde ayaa waxaa inoo waramay qaar ka tirsan ciyaartooyda,iyagoo inoo sheegay in dalka ay ka tagayaa iyagoo aad u jecel.
Halkan Ka Daawo Booqashada Kooxda Som United Ee Soomaaliya 2018